Daawo sawirada 30 sano kadib stadium Muqdisho oo si qurux badan loo dhisay | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Daawo sawirada 30 sano kadib stadium Muqdisho oo si qurux badan loo...
Daawo sawirada 30 sano kadib stadium Muqdisho oo si qurux badan loo dhisay
Dib u dhis xooggan oo mudooyinkan ka socday garoonka ciyaaraha ee Muqdisho Stadium ayaa soo gaaray heer gebogebo ah.
Garoonka oo dhowr bilood ka hor markii DF lagu wareejinayey burbur xoog leh uu ka muuqday ayaa hadda waxaa dib u soo laabtay bilicdii lagu yaqiinay.
Roogga cagaaran ama cowska macmalka ah ayaa la dhigay bartamaha garoonka, taasoo ka dhigtay mid quruxdiisa ay soo jiidatay dad badan.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Xukuumada Somalia Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in dhismaha garoonka %90 la dhameystiray 10-ka harayna si deg deg ah loo soo gebagebeyn doono.
1-da bisha Luulyo ee sanadkan 2020 oo ku beegan sanadguuradii 60aad ee ka soo wareegtay maalmaha xoriyada ayaa la filayaa in Madaxweyne farmaajo uu xariga jaro garoonkan iyo mashaariic kale oo dhismahooda uu ka socdo Muqdisho iyo gobolada dalka qaarkood.
HOOS KA DAAWO SAWIRADA GAROONKA
Previous articleCiidanka DF oo qarka u saaran qabsashada labo degmo oo muhiim ah & dhaq dhaqaaq socda
Next articleCiidamada galmudug oo gaalkacyo dad ku xir xiray